ANSOE (@ansoe) - PALnet
Myanmar Hive Community(Zeyar Shwe Myay)
လူတိုင်းမှာ ရှိတယ် အားလုံးသောမိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါ... လူ့လောကကြီးထဲမှာ ရှင်သန်နေထိုင်လာရတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ လူတို့ရဲ့သဘောကို အနည်းငယ်လောက်တော့ သိနေပြီလို့ ထင်တာပဲ... လူတွေရဲ့သဘောကို…
ပျား နဲ့ ယင် အားလုံးသော မိတ်ဆွေ‌အပေါင်း မင်္ဂလာပါ... ယခုရက်ပိုင်းမှာ Hive ဈေးက ခုန်တက်သွားတော့ အာရုံစိုက်စာရေး ပို့စ်တင်ကြနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်... ပန်းပွင့်တို့…
အော်_စိတ်ကူးတည့်ရာ အားလုံးသော မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါ... စာရေးစရာမရှိ... စိတ်ကူးတည့်ရာ ရေးရလိမ့်မဗျို့... စိတ်ကူးတည့်ရာဆိုတဲ့အတိုင်း စာတွေက ဟို‌ရောက် ဒီရောက် ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက်…
သမိုင်းဝင်မြသိန်းတန်စေတီတော် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မင်းကွန်းမှာတည်ရှိတဲ့ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် မြေးတော် စစ်ကိုင်းမင်းကလေးနှင့်မြေးတော်ဆင်ဖြူရှင်မယ် တို့တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော သမိုင်းဝင်…
ထိန်းသိမ်းသင့်ပေ အားလုံးသောမိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါ... ဒီနေ့တော့ ဗဟုသုတရစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြစေရန်အတွက်လည်းကောင်း မရေးဖြစ်၊…
အလုပ် အရှုပ် အားလုံးသောမိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါ... အခုတစ်လော စာမရေးနိုင် Post မတင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်... စာမရေး Post မတင်နိုင်ရတဲ့ အကြောင်းကလည်း ရှိနေတယ်... အရှုပ်တွေလုပ်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ် နေ…
ခြုံထဲက မျောက်ဥ အားလုံးသော မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါ... စာရှည်ရှည်မရေးဖြစ်ခဲ့တာလည်း အတော်ကိုကြာခဲ့ပြီ... စာရှည်ရှည်‌ရေးဖို့ကလည်း အချိန်များများလိုအပ်တတ်တာကိုး... အချိန်များများမရတဲ့အတွက်…
Swal Taw Tree The ***Swal Taw*** tree is average hight6to 30 feet t ... Swal Taw Tree The Swal Taw tree is average hight6to 30 feet tall. It is most common in India, Pakistan and southern China, grow as well as in Southeast Asia country.…
ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ဖို့(To Reach The Top) --- _______ If we want to rea ... ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ဖို့(To Reach The Top) If we want to reach the top, we have to dare to give up everything when we need to. This is natural truth. #myanmar #hive-myanmar…
Real Jade Stupa This is real Jade stupa in Mandalay region, Myanmar(Burma.) Jade stupa was build with real jade. Therefore known as Jade stupa. This is first and million worth Jade…